Mid kamid ah ragii kufsaday Caa’isha Ilyaas oo mag laga bixiyay – Kismaayo24 News Agency
by admin 20th February 2020 0116
Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, oo kamid ahaa saddexdii nin ee loo xukmay Kiiskii Caa’isha Ilyaas, balse laba kamid ah la qisaasay, ayaa la go’aamiyay in la sii daayo, kadib markii ay kiiskiisa ka heshiiyeen labada qoys.
Labada dhinac, ayaa ku heshiiyay in mag la siiyo qoyska dhalay gabadhii Yareyd ee Caa’isha Ilyaas Aaden, islamarkaana xorriyaddiisa dib loogu celiyo xukmane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, sida ay Warbaahinta u xaqiijiyeen ilo’ wareedyo sugan.
Magta lagu heshiiyay oo ah 75 neef oo geela, ayaa Hashiiba lagu qiimeeyay $500 oo Dollar, waxaana isla goobta lagu bixiyay lacag dhan $25, 000 oo Dollar, taasi oo u dhiganta 50 Halaad.
Labada qoys ayaa sidoo kale isla gartay, in mudda saddex bilood gudahood ah lagu bixiyo, inta dhiman Magta oo ah 25-Halaad, taasi oo lacag ahaan ku qiimaysan $12,500 oo Dollar.
Dhinacyada oo wada-socda, ayaa Heshiiska ay wada-gaareen oo qoraal ah la wadaagay laamaha Garsoorka iyo Amniga dowladda Puntland, waxaana sidaasi lagu amray in la sii daayo Xukmane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame.
Alshabaab oo goob fagaaro ah dhagax kula dishay mid kamid ah laba ruux oo kufsi lagu eedeyay halka midka kalana ay….
Daawo : Quruxda ka Muuqaata Deegaanka Goob-weyn oo Qiyaastii 15-KM u Jirta Magaalada Kismaayo